'तपाई हिडाई हेरेर तपाई कसरी सुत्नुहुन्छ' बताउन सकिन्छ ! - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
भोग लाग्नु, समयमा निद्रा लाग्नु राम्रो स्वास्थ्यको संकेत हो । तर अहिले हामी न त समयमा खाना खाइरहेका छौ न त सुति नै रहेका छौ। हामीले सुनेका छौं, हाम्रा पूर्खाहरु ढुंगाको सिरानी लगाएर मस्त निदाउँथे । अहिले हामी न्यानो, नरम र आरमदायक बिछ्यौनामा पनि निदाउन सक्दैनौं । किन हाम्रो निद्रा भाग्दैछ ? यसमा एकमात्र जवाफ छैन ।
यसका लागि हाम्रो तिब्रताका साथ बद्लिदो रहनसहन जिम्मेवार छ। शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन पनि पर्याप्त निद्रा जरुरी हुन्छ । आजको हाम्रो जीवनशैली निकै नै अस्तव्यस्त छ । अर्कोतिर हामी ऐशआरमपूवर्कक जीवन व्यतित गरिरहेका छौं । शारीरिक रुपमा निस्क्रिय छौं । मनमा भने उच्च आंकक्षा पालेका छौं । प्रतिस्पर्धाको भावना राखेका छौं । यावत् कुराले हाम्रो निद्रा विथोलिदैछ ।
यसैबीच बेइजिङको चिनियाँ एकेडेमी अफ साइन्सको एक अनुसन्धान टोलीका अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता(आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स)को मद्दतले मान्छेहरूको हिड्ने तरिकाबाट उनीहरू कसरी सुत्ने गर्दछन् भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिने बताएको छ ।
प्रोफेसर झू टिंगाशाओ र मनोविज्ञान संस्थानका सहकर्मीहरूको समूहले कुनै पनि व्यक्तिले पाइला चल्ने गति एवं तरिका नियालेर उक्त व्यक्तिको निन्द्रा र निद्राको गुणस्तर निर्धारण गर्ने सही विधि विकास गर्न सकिने वताएका छन् । अनलाइन साइनटेफिक जर्नल पीएलओस वनमा प्रकाशित जर्नल अनुसार यसका लागि मेशिन लगिङ एल्गोरिथ्म र भिडियो गेम कम्पोनेन्टको सहयोग लिनुपर्दछ ।
झू र उनको टोलीले बताएअनुसार यदि कुनै पनि व्यक्ति अनिदो छ भने उसको शरीरका माथिल्लो भागहरू जस्तै टाउको र काँध झुक्ने गर्दछ । यस विधिको मद्दतले स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई बढ्दो स्वास्थ्य समस्याको मापन गर्न कम खर्चिलो एवं सहज हुनेछ ।
खराब निद्रा तथा गुणस्तरहिन निन्द्राले मोटोपना, दुर्घटना साथै मुटु रोगजस्ता समस्याहरू निम्ताउने गर्दछ । गत वर्ष सरकारी अस्पतालले गरेको सर्वेक्षण अनुसार चीनमा करिब एक चौथाई जनसंख्यालाई निद्राको समस्या छ। यस्तै अमेरिकाले पनि सोहि परिमाण बराबरको तथ्यांकको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ ।
“निद्राको ध्वनी स्मार्ट वाच वा ब्रेसलेट लगाएर मापन गर्न सकिन्छ । ब्रेनवेभ मोनिटर अथवा अस्पतालमा एमआरआई स्क्यान गराएर कुनै पनि मानिस कति गहिरो निद्रा सुतेको छ भन्ने थाहा हुन् सक्छ ।” झूले बताए । उनको अनुसार यस पक्रियालाई व्यस्थितरुपमा जनमानसमा पुर्याउन राज्य एवं विज्ञ व्यक्तिको सहयोगको आवश्यक पर्ने झूको धारणा रहेको छ ।